izifo INSIMU wafunda ukusebenza kwayo nezifo zabesifazane, ngeshwa, kuyinto ehluke ebanzi. Phakathi kwabo kukhona izinhlobo acute, futhi lesi sifo bubé. Enye yalezi zifo endometritis ezingamahlalakhona.
Medicine izimbangela wafunda kahle endometritis ezingamahlalakhona, izifo, izimpawu, wafunda omunye izinkomba esemqoka kulolu cwaningo yesifo - endometritis chronic sokukhulelwa, ukwelashwa ngempumelelo atholakala. kokutshelwa ngokukhubazeka kwengane manje 14% of amacala pathologies izifo zabesifazane.
Ake uqale nge yokuthi endometritis ezingamahlalakhona - kuyinto ukuvuvukala. It kuvela ngenxa yokwelashwa abampofu of endometritis oyingozi. Ukuvuvukala kwenzeka ngenxa izici ezihlukahlukene alimale ukuba umlomo wesibeletho lesizalo ngenxa yokukhishwa kwezisu, nalokunye kungenelela kuhlinzwa (beshaya ipayipi, nokususa, eziningi uyadabuka wesibeletho ngesikhathi sokubeletha, njll). A kulethe enamandla ezikhulisa izimpawu endometritis okungamahlalakhona, i-izivikeli mzimba zibe buthaka.
Lonke okushiwo inkinga ngokuthi endometritis chronic ekhulelwe kumiswa ukuvuvukala intrauterine, okubizwa ngokuthi ukuvuvukala, nezimpawu endometrial (ukuqina). Ngokuvamile, lezi "iminonjana" wawubumba ecaleni elilodwa ukuvuvukala odongeni kwesibeletho, bahlala khona kuze kube phakade. receptor Eminye okuholela endometrial ukulimala okuqhubekayo ziqale ukusebenza kahle. Lubonakaliswa ukwehluleka nomjikelezo wokuya esikhathini, ukuqothuka kwezinwele okungavamile kuphelile nokuvuthwa endometrium (ukuqina) esikhathini lomjikelezo wesibili. Lezi pathologies kakade eyanele ukungabaza inhlanganisela endometritis nokukhulelwa, ngoba imbangela izisu nokuguqulwa , futhi ngokuvamile ngisho nenzalo.
Kodwa endometritis chronic sokukhulelwa akuyona kuzo zonke izimo kukhona alizimele. Ngenxa yokuhluleka e ukusebenza endometrium, ukulahlekelwa ezimbi ekuzimiseleni izinqubo zakhe ezibalulekile endleleni eya esizicabangelayo, wephule isingeniso we esibelethweni kanye nentuthuko yayo. Yiqiniso, owesifazane lowo uphethwe endometritis okungamahlalakhona, nokukhulelwa kungenzeka, kodwa ematfuba lokhu lincane kakhulu, futhi indlela engcono kakhulu kubhekwa a Nokuhlola kokuqala nguchwepheshe.
Ukuze aphathe kahle endometritis okungamahlalakhona, kubalulekile ukuhlola ngokunembile. Ukuxilongwa isifo kusekelwe zako yomtholampilo, okungukuthi, ezidabukile ubuhlungu esiswini, lesizalo ukopha ntshashintshe nganoma isiphi isikhathi phakathi umjikelezo, lwezimpawu esibelethweni futhi ubuhlungu bayo ngesikhathi luhlolo izifo zabesifazane, ubovu uketshezi kokuba nephunga edabukisayo. Ucacisa uphethwe ngesikhathi luhlolo ultrasound, isiqinisekiso sokugcina senziwa luhlolo histological ka scrapings we endometrium.
Sekwenzeka ukuthi luhlolo izifo zabesifazane owesifazane ukuthi nginesifo endometritis okungamahlalakhona, nokukhulelwa namanje iphutha.
Lesi sifo, ethwala i-alamu yimuphi owesifazane, kuyingozi kule nkathi. Uma kusaqalwa ayivezi ukuvuvukala hhayi ukwelashwa, lesi sifo kungathinta ulwelwesi fetus, bese izithelo. kwesiphetho esidabukisayo kule simo kungaba ukufa komntwana esibelethweni.
Njengomthetho, ukwelapha endometritis okungalapheki esibanzi. Kuhlanganisa ekwelapheni izifo okuyizinto ezihlobene, futhi kusekelwe ukwamukelwa of ngokubhukula, sedatives, amavithamini. Wabelwa ukuba abe ubuso benkinobho, isebenze receptor we endometrium.
Ngo udokotela endometritis sigaba acute sinquma imithi elwa namagciwane eziphumelela kakhulu ekuphathweni zabo ngqo ulwelwesi lesizalo. Ongenangqondo kubhekwe ukwelashwa ngemithi elwa namagciwane e ukuthethelelwa.
Ukuthuthukisa sokukhulelwa: Izimbangela Nemiphumela
PMS noma ukukhulelwa: Ingabe kungenzeka ukuhlukanisa ngesisekelo?
Kungani kunezinkolo osenyameni emhlophe phakathi nenkathi yokukhulelwa?
Ilungiselela ukuhamba, amasonto 37 okukhulelwa
Furatsilin ngesikhathi sokukhulelwa
Carnival eBrazil: mbukwane, ubuhle kanye okunethezeka
Ukuzibulala Katherine - amandla noma ubuthakathaka? Izimbangela zokuzibulala komuntu Catherine ( "Ukuduma")
Robert Kardashian: imisuka, biography nomndeni
Uwoyela Engine "Addinol": incazelo, izinhlobo, izici kanye nokubuyekeza